BizChat: အဖွဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 9, 2018 တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 9, 2018 Douglas Karr
ExactTarget (ယခု Salesforce) ၏ကြီးထွားမှုကာလအစောပိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီမလုပ်နိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုမှာ Yahoo! Messenger ။ Laptop ကိုဖွင့ ်၍ log in လုပ်သော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ထံမှ“ ငါနုတ်ထွက်ခြင်း” အကြောင်းကြားစာပေးသောမကြာခဏဆိုသလိုပင်ရယ်စရာကောင်းသောဟက်ကာများမက်ဆေ့ခ်ျများအပြင်ကိရိယာသည်မြန်ဆန်သောဆက်သွယ်ရေးအတွက်မတတ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတဲ့အခါဒီကိရိယာကမဖြစ်နိုင်တော့ဘဲအီးမေးလ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကိရိယာဖြစ်လာတယ်။
Slack လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကျော်ကြားမှုမှထနှင့်အချို့သောကုမ္ပဏီများကချစ်ကြတယ်နေစဉ် ... အခြားသူများလည်းရှိသည် ဘယ်လိုစနစ်တကျမှာညည်းညူ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခု။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အမျိုးမျိုး၊ ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများစွာနှင့်အီးမေးလ်တို့၏စိတ်ပျက်စရာများကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ငါ့မှာ Facebook Messenger ကိုသုံးတဲ့ဖောက်သည်တွေရှိတယ်၊ တချို့က Basecamp၊ တချို့က Brightpod ... ပြီးတော့အများစုက email ကိုသုံးကြတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်တွင်စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဦး စားပေးခြင်းအတွက်အထူးကိရိယာများရှိသည်။ ဒါဟာအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပဲ!
BizChat ကုမ္ပဏီများအတွက် ၄ င်းတို့၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းမှုအားလုံးကိုစနစ်တကျရှိသောနေရာတစ်ခုသို့ရောက်အောင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
BizChat သည်လုံခြုံသောစီးပွားရေးအဆင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းမှုအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အုပ်စုဖွဲ့စကားပြောခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်သတင်းစကားများကို cloud ပေါ်ဝေမျှနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအတွက်အဆင်ပြေသော application တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင့်အားကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး၏ပို့စ်များကိုမျှဝေရန်၊ နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေးဖိုင်များကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။
BizChat ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကို ၀ န်ထမ်းများအားအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သင့်အား ၀ န်ထမ်းများအားချက်ချင်းလက်လှမ်းမီစေသည့်အစွမ်းထက်သောဗဟို ၀ န်ထမ်းလမ်းညွှန်ရှိသည်။ အလုပ်များကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖန်တီးနိုင်သည်၊ သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ သွားစဉ်မှတ်စုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ Desktop မှမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များသို့ပြောင်းလဲပြီးအရာအားလုံးကိုစည်းညှိနေနိုင်သည်။ အပြင်ပါပဲ အသုံးပြုသူ ၁၀၀ အထိအခမဲ့ဖြစ်သည်.
BizChat Group Chat၊ တိုက်ရိုက်စာတိုပေးပို့ခြင်း၊ ခေါ်ဆိုခြင်း၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးစာပို့ခြင်းနှင့်ဖိုင်မျှဝေခြင်းများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်အသင်းအဖွဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုရိုးရှင်းစေပြီးသင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်တွေ့နိုင်သောကိရိယာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ အကောင်းဆုံးအနေနှင့် BizChat သည်သင်၏စီးပွားရေးစကားဝိုင်းများကိုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ BizChat သည်သင်၏စကားပြောဆိုမှုများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သင်ရည်ညွှန်းလိုသောမက်ဆေ့ခ်ျများမှအလုပ်များကိုတိုက်ရိုက်ဖန်တီးခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်ချက်ကိုပေးသည်။
VisCircle: သင်၏ 3D အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဖြင့်သင်၏အီလက်ထရွန်းနစ်ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာများကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ